उड्ने बाइक बन्यो : बुकिङ खुला, मूल्या कति ? - Kendra Khabar
उड्ने बाइक बन्यो : बुकिङ खुला, मूल्या कति ?
२०७५, २६ कार्तिक सोमबार ०५:१९
प्लेन, हेलिकाेप्टर मात्रै हाेइन अब बाइकमा चढेर उडने दिन पनि अाएकाे छ । रसियन टेक कम्पनी ‘होभरसर्फ’ ले चढेर उड्ने बाइक पनि बनाइसकेकाे छ । कम्पनीले अग्रिम बुकिङ समेत थालेको छ।